I-SOCXO: Ukumaketha Kokumela Ngamanani Asuselwa Kokusebenza | Martech Zone
Njengengxenye yesimo sokumaketha kokuqukethwe, ukumakethwa kwedijithali kuze kube manje kube yindlela ekhethwayo yokuthi amaBrands afinyelele futhi ahlanganyele ababukeli bawo ku-inthanethi. Imodeli ejwayelekile ye-Digital Marketing iqukethe inhlanganisela ye-imeyili, i-Search kanye ne-Social Media Marketing futhi kuze kube manje isebenzise indlela yefomula futhi ekhokhelwayo ukudala nokusabalalisa okuqukethwe komkhiqizo online.
Kodwa-ke, kube nezinselelo nezinkulumompikiswano ngecebo, ukulinganisa, imiphumela kanye ne-ROI yendlela yemidiya ekhokhelwayo yokumaketha kwedijithali.Nakuba i-imeyili nosesho kunganikeza inani elijwayelekile lesilinganiso sokumaketha, i-Social Media Marketing ibhekene nezinguquko eziqhubekayo ze-algorithmic kanye nenani eliphansi elibonakalayo. yokuzibandakanya nabasebenzisi eziteshini zokuxhumana zenhlalo.
I-grail engcwele yokufinyelela okungokwemvelo kokuqukethwe okukhokhelwayo noma izikhangiso kumithombo yezokuxhumana bekulokhu kuyinselelo engapheli.
Kusobala impela ukuthi, okuqukethwe okukhiqizwa ngumsebenzisi kunikezwa kubaluleke kakhulu kunokuthunyelwe komkhiqizo / izikhangiso kanye nokuqukethwe okuvela kubangani, umndeni kanye nontanga kunokubaluleka nokuzibandakanya okuningi ngabasebenzisi kuziteshi zokuxhumana.
Ukwenza i-Social Media Marketing ngokusebenzisa Abameli Bomkhiqizo Abathembekile
Ukumaketha Kwezokuvikela, umqondo oguqukayo noma isimangaliso sokumaketha kokuqukethwe, kuhlose ukuxazulula ezinye zezinselelo ezingenhla zeBrands. I-Advocacy Marketing iyisiteshi esiphelele sokumaketha umphakathi seBrands ngokusebenzisa ababambiqhaza bayo.
Ukumaketha Kokumela ngokusebenzisa amapulatifomu afana I-SOCXO inikeza indlela eseceleni yokuthengisa ngomkhiqizo ngokwakha indwangu yokuxhumana nomphakathi yamabhizinisi amukela izinkolelo futhi alingise indlela yokuziphatha kwezokuxhumana ngaphakathi kwamabhizinisi.
Ukumaketha Kokumela, ngamagama alula, kwenza AbakwaBrands bakwazi:
Izinga lababambiqhaza (abasebenzi, ama-alumnis, ophathina, amakhasimende nabalandeli) boMkhiqizo
I-Curate bese ubanikeza okuqukethwe okuhlukile nokubonayo okuhambisana nomkhiqizo
Dala ukwethembana, ukwenza izinto obala futhi uzibandakanye ngobuhlakani njengabameli bamaBrand
Sabalalisa futhi wandise okuqukethwe okunjalo kweBrand kumanethiwekhi wabo wezokuxhumana nokuxhumana
Thuthukisa ukufinyelela kwezinto eziphilayo nokuzibandakanya kokuqukethwe kuma-social media
Khulisa inani lomkhiqizo ongaphatheki kanye nenani lebhizinisi elibonakalayo lemikhiqizo
Izinzuzo Zokumaketha Zokumela
Ixhuma bonke ababambiqhaza (abasebenzi, ama-alumnis, ophathina, amakhasimende kanye nabalandeli) beNkampani kwi-web eyodwa, indawo egcwele kanye nesikhulumi seselula ukuxhuma nokuzibandakanya noMkhiqizo noma kuphi, nganoma isiphi isikhathi
Kwakha ishaneli yokuxhumana ethembekile futhi esobala yeNkampani / iBrand ngabasebenzi bayo bangaphakathi nabangaphandle
Inika amandla abasebenzi kanye nozakwethu ukuthola ulwazi kuzinhlelo zeNkampani, imikhakha yezimboni / imakethe, ulwazi lomuntu oncintisana naye, umkhiqizo nomkhiqizo
Inikeza ukufinyelela kokuqukethwe komkhiqizo ngokwemikhankaso yokukhangisa, imikhankaso yomsebenzi, imikhankaso yomkhiqizo, amabhulogi, okuqukethwe kokufunda kanye nemininingwane yangaphandle yemakethe
Isebenzisa abasebenzi bayo ukuthi baveze imibono yabo nemibono yabo njengobuholi bomcabango nokuqukethwe kolwazi
Ikhuthaza abasebenzi, ophathina, amakhasimende kanye nabalandeli njengabaMeli Bomkhiqizo ukukhulisa okuqukethwe ngamanethiwekhi abo ezokuxhumana nezokuxhumana futhi babe ngabathonya abancane kuBrand
Isiza ukufaka uphawu lokushicilela kwabasebenzi bayo ezinkundleni zokuxhumana - uphawu lomqashwa
Inika amandla izinhlelo Zokuthengisa Komphakathi, Zokuqasha Komphakathi kanye Nezokukhulisa Umkhiqizo ngabameli
Ulalela okushiwo ngabasebenzi, abalingani kokuqukethwe, imibono
Iyabona, igeze futhi ivuze abameli bokusekela i-Brand
Kuthuthukisa ukuzibandakanya kwabasebenzi, ukugcinwa kanye nokweneliseka
Kuthuthukisa isiko lendawo yokusebenza nokuzibandakanya kuwo wonke amaqembu we-line-of-business
Ngabe iSOCXO ikwenza kanjani lokhu?
I-SOCXO ibingomunye wabaqalayo ukungena emncintiswaneni wokuncintisana nokuqukethwe emkhankasweni wokumaketha. Iningi lamapulatifomu akhona esikhaleni se-Advocacy Marketing abelokhu ebhekana nezidingo zabakhangisi maqondana nokusatshalaliswa kokuqukethwe noma izidingo zokuxhumana zangaphakathi emsebenzini.
Kodwa-ke, i-SOCXO izihlukanisile ngokwanelisa hhayi kuphela izidingo zabakhangisi eNkampanini, ibenze bakwazi kanye namanye amaqembu asebhizinisini afana ne-PR, HR, Sales, Product kanye nobuholi ukuqhubeka nokuxhumana nababambiqhaza babo ngokusebenzisa izicelo eziningi zokungenelela nokuzibandakanya ukugcina abasebenzi bexhunywe neBrand neNkampani.
I-SOCXO ihlose ukuhlinzeka ngomnikelo olula futhi ohlukanisiwe kanye nekhasimende elinamandla lokugibela kanye nokuphathwa kwempumelelo ukusebenzisa ukumaketha kokukhuthaza nokuzibandakanya kulo lonke iBrand.
Ngaphandle kokusiza izinkampani ukukhulisa okuqukethwe kwazo komkhiqizo kumaSocial Media ngokusebenzisa abameli babo bohlobo lomkhiqizo, i-SOCXO isiza izinkampani ukukhulisa Abasebenzi bazo kanye nokuzakhela igama lomkhiqizo nakuSocial Media.
I-SOCXO ingumholi ekukhuthazeni umqondo wokumaketha kokukhuthaza eNdiya kanye nomuntu osanda kungena e-US onamaBrands angaphezu kwama-25 njengamakhasimende kungakapheli unyaka owodwa wokwethula ukunikela kwawo ngo-2017.
Izici Zomkhiqizo we-SOCXO nama-Differentiators
Ukudalwa kokuqukethwe nokutholwa - Ukuze kuqedwe inselelo engapheli yokwakha nokuhlonza okuqukethwe okusha, i-SOCXO inikeza amandla okulanda ngokuzenzakalela nokushicilela okuqukethwe komkhiqizo kusuka kumabhulogi, amakhasi ezokuxhumana, nokunye okuphakelayo, ukuhlunga lokho okuqukethwe, bese wengeza izincomo zokuqukethwe.
Ukulinganisela kokuqukethwe nokushicilela - Ngokulinganisela kokuqukethwe okukhaliphile, abakwaBrands bangaqinisekisa ukuthi banamathela kuzinqubomgomo zokuxhumana futhi banikeze okuqukethwe okufanele / okunolwazi kubasebenzi, ophathina kanye namakhasimende abo. Abaphathi bokuqukethwe bangasetha izihlungi ukuthi zishicilele ngokuzenzakalela okuqukethwe kubasebenzisi bazo zisebenzisa amakhalenda wokuqukethwe futhi zisethe ukuphela kwesikhathi kokuqukethwe ukuze zikususe eshalofini. Abameli Bommeli bangasetha amashejuli okwabelana ngokuqukethwe emakhasini abo e-Social Media.
Ukuqiniswa Nemivuzo - I-gamification eyakhelwe ngaphakathi inikezela ngamaphoyinti ekusebenzeni komsebenzisi kungxenyekazi yokwakha, ukushicilela nokwabelana ngokuqukethwe, okubandakanya izinhlelo zokusebenza zangaphakathi. Amabhodi wabaholi namabheji anika amandla abathengisi ukuthi baklonyelise futhi babone abameli abasebenzayo futhi abafaka isandla ekumeleleni brand nasekuzibandakanyeni. Ukwakhiwa komvuzo nesici sokuhlenga ukuvumela abaphathi ukuthi bakhuthaze ukuzibandakanya kwabasebenzi ngokuqukethwe komkhiqizo.
Izibalo nokuzibandakanya - Idatha yezibalo ehlukile evela kuzo zonke iziteshi zemidiya yokuxhumana kokuqukethwe nokuzibandakanya komsebenzisi, kufaka phakathi ukukhiqizwa okuholayo, ukubukwa kwamakhasi, amaseshini namamethrikhi wokusebenzisana. Ukuhlanganiswa ne-Google Analytics kanye nokubika okubalulekile kokuqukethwe okuthrendayo, okuqukethwe okwabiwe kakhulu namathegi womsebenzisi asebenzayo.
Izinhlelo zokusebenza ezinophawu lweselula - I-SOCXO inikela ngezinhlelo zokusebenza zeselula ezihlukile nezinamuntu ngamunye kuMkhiqizo ngamunye ukwenza ngezifiso umuzwa wohlelo lwabameli balo (Abasebenzisi)
Ngenkathi abanye abadlali beplatifomu begxila kuphela ekwabelaneni ngokuqukethwe njengomsebenzi obalulekile womkhiqizo wabo, izinkolelo eziqinile ze-SOCXO ukuthi abasebenzi ababandakanyekayo bangabameli abaphambili. Ngokuqondene nalokho, i-SOCXO idala inhlanganisela yokuncoma yezici ezingezwe ngevelu ukwanelisa i-gamut yezinhloso zokumaketha kokukhuthaza.
Ngaphandle kwesici esiyisisekelo sokwabelana nokulinganisa okuqukethwe komkhiqizo, i-SOCXO inikeza imisebenzi yokubandakanya abasebenzi eqinile, izici zomazibuthe eziholayo kanye nokuqonda okuqhutshwa yidatha ukugcina abameli bomkhiqizo bexhunywe neBrand nePlatform ngokusebenzisa Izicelo zeMicro-Service:
Ama-SOCXOs ukutholwa kokuqukethwe okuhlukile kohlelo kusetshenziswa amagama angukhiye we-semantic kusiza ukulanda nokuhlunga okuqukethwe okuhlobene nomkhiqizo ngokuzenzakalela kusuka kuwebhu ngesikhathi sangempela - ngaleyo ndlela kunciphise umzamo wokusesha okuqukethwe okusha nsuku zonke
Ukuvota kombono nokuhlola izinhlelo zokusebenza ezincane kunikela ngokubamba iqhaza kwesikhathi sangempela nempendulo eqhubekayo evela kubameli
Isilinganiso sesipiliyoni sabasebenzi ukuthola ukuqonda ngokuzibandakanya kwabasebenzi nokweneliseka
Ukuhlanganiswa nezinhlelo zokufunda zokulawulwa kokuqukethwe nama-CRM
Isizukulwane Sokuhola Esakhelwe ngaphakathi kanye ne-Call-to-Action plug-ins kokukhuliswa kokuqukethwe komkhiqizo / okuqukethwe okufanele kumasayithi angaphandle
Ukulandelela Nokulinganisa Yonke imikhankaso Yokuhola Isizukulwane
Izibalo zokuqonda zokuzibandakanya komsebenzisi nokuqukethwe ukwenza ngezifiso okuqukethwe
Amanani entengo yokusebenza kwe-SOCXO
I-SOCXO ukuphela kwesikhulumi sokumaketha esinikela ngemodeli yamanani entengo yokusebenza, kunentengo esuselwa kumsebenzisi ethathwa njengezindleko ezingenakulinganiswa ngabakhangisi. Imodeli eyingqayizivele ye-pay-per-share yama-SOCXO iqondaniswe ngokusobala nomsebenzi olindelekile nomphumela wokuziphatha komsebenzisi epulatifomu, okwabelana ngokuqukethwe komkhiqizo kumanethiwekhi wabo weSocial Media.
Abamakethi sekuyisikhathi eside bamukela amamethrikhi weyunithi namanani entengo yokusebenza kokumakethwa kokuqukethwe ngokuya nge-Cost per Impression, Cost per Click kanye ne-Cost per Lead njll. ku-SOCXO kubhekiswe ezinhlosweni zabo ekumaketheni kobuholi.
Ummeli njengomqondo nomqondo wokumaketha ulungele ukuthola ukubonakala okukhulu kanye nokudonsisana phakathi kwamaBrands nama-Agency ngonyaka we-2018. I-Advocacy Marketing ithole isikhala sayo esikhaleni se-Content Marketing esikhishwe ku-imeyili, ku-Search naku-Social Media Marketing futhi izodlala indima ebalulekile njenge esinye isiteshi sokunikela, ukukhuthaza nokwandisa okuqukethwe ngezindlela eziphilayo, ezethembekile nezingokoqobo.
I-SOCXO, ne-SaaS ne-platform yayo ehlukanisiwe, izimisele ukuxhasa amaBrands alangazelela ukuyisebenzisa.
Thola Isivivinyo Samahhala SOCXO
Tags: ukumaketha kokukhuthazaukumela umkhiqizoUkukhangisa Okuqukethweukukhuthazwa kwamakhasimendeukuxhaswa kwabasebenziUkuzibandakanya kwabasebenziukukhuliswaUmmeli wozakwethuUkuqashwa Komphakathiukuthengisa komphakathisocxo
UMukund ubone ukuthi ukumaketha kwe-Advocacy, igama elisha nomqondo omusha, kunanela kusizinda sokumaketha esiveza umqondo wokwakha abameli bezimpawu zokuletha ukufinyeleleka okungokwemvelo kokuqukethwe komkhiqizo ngeziteshi zokuxhumana zenhlalo. Ngalo mqondo engqondweni, uMukund wasungula I-SOCXO futhi safaka umqondo wokwakha ipulatifomu yewebhu elula kodwa enamandla nomkhiqizo weselula onophawu lwamabhizinisi ukuze ama-Enterprises axhume futhi asebenzise ibutho lawo labasebenzi, ophathina namakhasimende abo ukuba babe ngabasekeli bezimpawu zomkhiqizo nabathonya abancane ezinkundleni zokuxhumana.
IVydia: Phatha okuqukethwe kwakho kwevidiyo namalungelo edijithali